Phila ixesha elide! | Amadoda aQinisekileyo
ULucas garcia | | Chetyiwe
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luxhalabile ... Ngomhla onje namhlanje, uyageza, uhlamba iinwele zakho, kwaye ngequbuliso uyabona ukuba kancinci kancinci unenwele ezincinci nezincinci. Ifikelela kwinqanaba lokuba ukuba ilahleko yeenwele iqhubela phambili, akukho ndlela yokuyifihla.
Ewe, akukho nto uyifihlayo, kuba inkqayi ayisiyonto ekufuneka ubenentloni ngayo, zininzi iindlela zokwenza ukuba impandla yakho ibonakale ilungile, kwaye namhlanje ndiza kukunika isikhokelo esilula ukuze ube nentloko yakho egqibeleleyo.
1 Inyathelo lokuqala… Ndenza ntoni ngeenwele zam xa zingayeki kuwa?
2 Inyathelo lesibini… Ndiyaqala ukucheba intloko, ndizoqala phi?
3 Isinyathelo sesithathu ... Ukuhanjiswa kwamanzi kubalulekile
4 Luhlobo luni lweempahla ezifanelekileyo kumadoda anempandla?
Inyathelo lokuqala… Ndenza ntoni ngeenwele zam xa zingayeki kuwa?
Singazisebenzisa iimveliso zezithambiso ukusinceda sikunqumame ukuwa, kodwa kukho amaxesha apho siye salinda kwaye sekude kakhulu. Ukuba kunjalo, inyathelo lokuqala kukuba kwamkelwa ukubona eyona nto iqhubekayo. Ukuba akukho ndlela yokufihla nantoni na, sika iilahleko zakho, kwaye ndikuxelela ngokoqobo, lixesha lokuba uchebe intloko.
Ngaphambi kokuqala, ndikubonisa uthotho lwabadlali kunye neemodeli ezihlengahlengise ngokugqibeleleyo kwintloko yabo enempandla efanelekileyo kubo. Abadlali abanjengoBruce Willis, uJason Statham okanye uSir Patrick Stewart kunye neemodeli ezinje ngoTyson Beckford (ongakhange alingane), bakhethe ukucheba iintloko ukubonisa ukuba ukucheba kakuhle kugqibelele.
Inyathelo lesibini… Ndiyaqala ukucheba intloko, ndizoqala phi?
Siza kuqala ngokusika iinwele ngokufutshane ngangokunokwenzeka ngezikere emva koko sisebenzise isitshetshe sakho kwaye kancinci ngokucheba intloko kwaye siyishiye kuyo yonke indawo ngokulinganayo. Kubhetele kakhulu ukuba xa ucheba uyenze ngeenwele ezimanzi. Okwangoku kukho iincakuba ezintle emarikeni ezinokusinceda ukuba sigqibelele. Ukwenza ukucheba intloko kube lula ngakumbi, ungayenza phantsi kweshawa. Amanzi ashushu aya kukunceda uvule ii-pores zakho kwaye wenze kube lula ukusika iinwele zakho.
Ukuba uyenza ngaphandle kweshawa, sebenzisa ijel yokucheba kwaye uhlala uqala phezulu entlonzeni, emva nangasemva kwaye uphele ngamacala.
Isinyathelo sesithathu ... Ukuhanjiswa kwamanzi kubalulekile
Nje ukuba ugqibile, yihlambe ngamanzi abandayo emva koko usebenzise isithambisi ukunceda ukuzola kunye nokunciphisa ukucaphuka.
Emva koko, ngoncedo lwesipili esisesandleni, jonga naziphi na iinwele ezinenkani okanye amabala anokuhlala.
Njengoko ubona, ukwenza isigqibo kulula kwaye kusenza ngakumbi nangakumbi. Kwaye ngoku ndiza kuthetha nawe ngento enomdla ngokuqinisekileyo kuwe:
Luhlobo luni lweempahla ezifanelekileyo kumadoda anempandla?
Impendulo ilula. Ukuba ubulindele uhlobo oluthile lokudityaniswa, ungalindelanga, kuba iimpahla ezifanelekileyo Indoda eneenkqayi iyafana naleyo yeenwele. Akukho mahluko, konke kuxhomekeke kwisitayile sakho kunye nezinto oziva ukhululekile kuzo.
Nceda uqaphele oko eyona nto ibalulekileyo sisimo sakho sengqondo. Kuya kufuneka uzithembe kwaye ucinge ukuba eli linyathelo elinye nje elinye, kwaye ungafumana okuninzi kulo, kwaye ube ngowona unomtsalane.
Kwi -classclass: Ukuhlala kumbiwe, inkxalabo yokuqala yobuhle yamadoda
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Phila ixesha elide!
Iikipa eziyimfuneko kobu busika. Musa ukulibala ngabo!
Izicathulo zeSupra Skytop III, zonke ziza zibomvu